AKHRISO: Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar cusub ku Saabsan Dhismayaasha Guryaha iyo Gudoomiyayaasha oo Beerta Galay !!! – wadankaaga.com
Home / Somali News / AKHRISO: Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar cusub ku Saabsan Dhismayaasha Guryaha iyo Gudoomiyayaasha oo Beerta Galay !!!
cowke August 3, 2017	Somali News Leave a comment 27 Views
Maamulka gobolka Banaadir oo maanta kulankoodii todobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan gobolka, iyadoo uu shir guddoominayey Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed.
Guddoomiyeyaasha degmooyinka ayaa warbixino ka siiyey guddoomiye Taabit xaaladihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay degmooyinka magaalada, gaar ahaan dhinacyada amaanka, nadaafada iyo arrimaha bulshada.
Waxaa ugu dambeyn laga soo saaray kulankan qodobo ku saabsan nidaamka canshuuraha dhismaha guryaha oo wax laga bedelay.
Afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in kulanka maanta laga soo saaray go’aano ay ka mid yihiin in wixii hadda ka dambeeya xarunta Maamulka Gobolka Banaadir kaliya laga qaato warqadaha Fasaxa dhismaha guryaha.
Waxaa uu sheegay in Maamulada degmooyinka aysan hadda ka dib bixin karin warqadaha fasaxa dhismaha, wuxuuna xusay in go’aankan uu yimid ka dib markii shacabka Muqdisho ay cabasho ka keeneen qiimaha canshuuraha xarumaha degmooyinka looga qaado dadka dhisanaya guryaha oo ahaa mid xad dhaaf ah.
Previous AKHRISO: Dowlada Somalia oo soo saartay go’aan ka nixiyey shirkaddo ay heshiisyo kala duwan kula jirtay.
Next Dhageyso: Askar ku Geeriyootay Diyaarad ku Burburtay Djibouti